Xarunta Palandoken Ski Center Diyaar u noqoshada soo-dhaweynta Ski Lovers | RayHaber | Wadada Tareenka | Wadada weyn | cable baabuur
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari25 Erzurum ReviewXarunta Palandöken Ski Center waxay diyaar u tahay soo dhaweynta dadka barafka jecel
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 25 Erzurum Review, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, Headline, TURKEY, TELPHER 0
palandoken dalxiis barafka ayaa diyaar u ah inuu soo dhoweeyo kuwa jecel barafka
Xarunta Erzurum Palandöken Ski Center waxay diyaar u tahay inay marti galiso kuwa jecel jiilaalka hudheelkeeda 5, hoyga 9 dabaqyada iyo dhaadheer barafka iyo waliba riwaayado iyo ururo la furi doono xilliga cusub.
Deegaanka dabiiciga ah Maqaallo dhaqdhaqaaqa dalxiiska Winter marka la eego meelaha waaweyn ee Turkey ayaa ski ee heerka kowaad iyo isagoo ugu sarreysa 3185 MA Palandöken Mountains, oo ku yaalla koonfurta gobolka Erzurum oo kordhiyay jihada bari-galbeed. Buuraha Palandöken waxay daboolayaan dherer ahaan qiyaastii 70 km dhererkiisuna waa 30 km. Baaxadda buuraha waxay ka bilaabataa 2000 m illaa 3176 m. Buurta faca weyn ee 3176 m waxay ka kooban tahay barta ugu sarreysa ee Buuraha Palandöken, oo buurta yar ee 3095 m waxay kacdaa dhanka koonfureed ee magaalada Erzurum bartamaha iyo xadka koonfureed ee xadka Hınısboğazı
Buuraha Palandöken, oo bixiya buuro dhexdhexaad ah, ayaa guud ahaanba madhalays ah marka laga reebo dooxooyinka la ilaaliyo iyo meelaha dhirta laga gooyo. Jaranjarada iyo jirridaha ayaa badanaa daboola. Burburkii ka dhashay darteed, qaab dhismeedka juquraafi ahaanta ayaa soo ifbaxay halkaas oo jaranjarooyinka jaranjarada ah ay si kedis ah ugu qasan yihiin dabaqyada muuqda. Markii ay sii korodho, topography-ga ayaa isku beddelaya qaansooyinkiisa waaweyn iyo jaranjarooyinka isku-xidhan.
Erzurum waxaa ku hareereysan xero buuraley ah waxayna leedahay jawi qabow. Mid ka mid ah qodobbada u oggolaanaya dalxiiska muddada dheer ee dalxiiska ee Erzurum waa shaki la'aan inay tahay astaamaha cimilada. Erzurum waxay leedahay cimilo siisa raaxo bioclimatic sababtuna tahay dhulkoo sarreeya waxayna leedahay saameyn wax ku ool ah. Xilliga xarunta dalxiiska jiilaalka ee Palandöken waa N 150 day / sanadkii ”wuxuuna ku saabsan yahay Diseembar, Janaayo, Febraayo, Maarso iyo Abriil. Xaaladaha qaboobaha caadiga ah barafka barafka ee meelaha barafka ah wuxuu ka sarreeyaa 2 m. Tayada barafka ayaa aad muhiim ugu ah howlaha barafka. Xaqiiq ahaan, daboolka barafka waa inuu ku dhacaa qaab baraf qafiif ah, ma ahan baraf baraf ah ama baraf qoyan, si loo abuuro ilo dakhli dalxiis. Tayada barafka ee Palandöken aad ayey u kacsantahay, laakiin waxay leedahay tayo baraf leh oo barafaysan qaab dhismeedka jirkeeda.
tayada Snow waa lagu keydsho hantida, dejisa xarunta dalxiiska jiilaalka Palandöken xaaladda faa'iidada badan ee jira xarumaha kale ee dalxiiska xilliga jiilaalka ee Turkey. Marka laga soo tago muuqaalka barafka cad, tirada maalmaha qoraxda leh ee la arko sanadka oo idil ayaa sidoo kale ka mid ah faa'iidooyinka barafka iyo dalxiiska isboortiga jiilaalka ee Erzurum. Isla mar ahaantaana, xaqiiqda ah in xarumaha barafku ay qiyaastii yihiin 20 daqiiqo oo ka fog gegada diyaaradaha ayaa ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee dalxiiska jiilaalka u soo jiitaan Erzurum.
Mashruuca ugu horreeya oo halis ah oo dhamaystiran Palandöken Ski Center for dalxiiska xilliga jiilaalka ee Turkey "Erzurum ee Palandöken Winter Cayaaraha iyo Dalxiiska Master Plan" daraasadda. Daraasadda, waxaa la go'aamiyay in Buuraha Palandöken ay leeyihiin astaamaha xarun isboorti oo jiilaalka caalamiga ah oo leh qaab dhismeedkeeda dabiiciga ah iyo jawiga adag. Mashruucu wuxuu saadaalinayaa in wadar ahaan 32 kun oo qof ay ku ciyaari karaan seddex meelood, tartamada caalamiga ah iyo xitaa ciyaaraha Olimbikada xilliga qaboobaha ayaa loo abaabuli karaa, iyo 6 kun oo qof ayaa si toos ah loogu shaqeyn karaa.
Qorshaha Masterka Ciyaaraha iyo Dalxiiska Erzurum-Palandöken (1991) waxaa loo aqoonsaday seddex goobood oo muhiim u ah barafka lagu ciyaaro ee gobolka. Kuwani dhammaantood waxay ku yaalaan jihada waqooyiga ee buuraha Palandöken. Beerahan ayaa kala ah; Hınıs-Palandöken Strait Location, Gez Plateau iyo Konaklı Gobolka. 25 meelahaas waxaa daboolay qorshaha sayidka. Markaan ku soo darnay Gobolka Kandilli oo lagu sameeyay qaab dhismeedka Ciyaaraha Caalamiga ah ee Jaamacadaha Caalamiga ah, waxaan qaabayn karnaa xarumaha dalxiiska jiilaalka ee Erzurum qaybta ugu weyn ee 4. Hınıs - Palandöken Strait Location: Waxay ku taalaa Erzurum Strait (oo sidoo kale loo yaqaan Hınıs Strait iyo Tekman Strait) oo ku yaal koonfurta koonfurta Erzurum iyo 5 km. Aaggan, oo loo yaqaan Palandöken Ski Resort, waxaa ku jira Ejder Hill iyo hareeraheeda oo ku yaal buuraha Palandöken. Palandöken Ski Center waxay noqotay mid ka mid ah meelaha dalxiiska jiilaalka ee ugu muhiimsan dalkeenna oo leh garoonno baraf ah, dhaadheer dhaadheer, dhismeyaal hoy iyo qalab tikniyo farsamo oo halkaas lagu edbin karo.
Hawlaha isboortiga xilliga qaboobaha ee Palandöken Ski Center waxay ku yaalliin xadka dhererka dhererka mitir ee 2200-3176 waxaana laga fuliyaa waqooyiga ilaa koonfurta dhanka Namlıkar, Hınıs Strait, Konaklı, Ülkeroğlu iyo Yağmurcuk. Palandöken waa mid ka mid ah meelaha lagu jimicsado ee ugu caansan adduunka iyadoo masaafadeeda xNUMXkm u jirta bartamaha magaalada Erzurum. Dalxiis barafka sida caadiga ah waa 5 - 25 daqiiqo oo ka fog gegada diyaaradaha Erzurum.
Orodyahannada barafka ee ka socda Palandöken Ski Resort ayaa ka mid ah kuwa orodka dheereeya ee ugu dheereeya adduunka. Palandöken Ski Center waxay leedahay wadarta guud ee xNUMX socod baraf ah oo heerar kaladuwan oo adag ah, oo ay ku jiraan jidad baraf ah oo ujeedooyin badan leh, iyo sidoo kale Xiriirka Caalamiga ah ee Ski Federation (FIS) oo loo oggol yahay in lagu ordo baraf baraf ah oo loogu talo galay dadka barafka leh inay barafka baraan. Dhererka ugu dheer waa 27 km iyo wadarta guud ee iswaafajinta barafka waa 12 km. Farqiga udhaxeeya bilowga iyo soo afjarida burooyinka waa 28 mitir. Orodooyinka Ejder iyo Kapıkaya ayaa la shaaciyay inay yihiin diiwaan gashanada Olambikada ee tartamada Slalom iyo Great Slalom. Tartannada Slalom iyo Great Slalom waxaa lagu qabtaa dhagxan yar, sidaa daraadeed waxay ka mid yihiin meelaha ugu doorka weyn ee laga doorto xarumaha barafka.
Waxaa jira kursi xNUMX ah (5 qof / saacad), 4500 chairlift (1 qof / saacad), 300 ilmaha kor u qaad (wadarta awoodda 2 qof), 1800 gondola qaad (1 qof / saacad)) Xarunta Ski. Palandöken sidoo kale waxay abaabushaa tartamada barafka iyo barafka iyo dabbaaldegyada barafka qaybo kaladuwan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira afar xarumood oo dalxiis oo buurta ah, hal xiddig 1500 iyo xiddig 5 3 ah, iyo sidoo kale aqal baraf ah, xarumaha maalinlaha ah iyo makhaayadaha. Awooda sariirta ee lagu heli karo meelaha lagu ordo barafka waa qiyaastii 4.
Turkey ayaa muhiimadda ra'iisul iyo waa mid ka mid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka hoose Palandöken Mountains sabab u ah waxbarashada by dadweynaha iyo qaybaha gaarka loo leeyahay, barafka iyo dhaqdhaqaaqa dalxiiska jiilaalka fuliyay sida saldhiga caalami ah oo lagu gartaa in jihada in. Dhanka kale, waxaa la arkaa in dalxiisayaasha gudaha ay aad uga badan yihiin tirada dalxiisayaasha shisheeyaha ah. Muuqaalka macmiilka inta badan dalxiisayaasha shisheeyaha ah ee booqda Palandöken waa dalxiisayaal ka kala socda Ukraine, Russia, Iran, Azerbaijan, Georgia iyo Bariga Dhexe. 25 waa dhismaha dhabbaha barafka casriga ah ee dhabta ah ee Palandöken. Ciyaaraha Jiilaalka ee Jaamacadaha Caalamka oo la bilaabay.
Konakli: koonfurta-galbeed ee Erzurum iyo 18 km ilaa bartamaha magaalada. Waxay ku taalaa inta u dhaxaysa tuulada Konaklı (2200 m) iyo buurta Kkurkulak (3084 m), xarunta barafka ayaa inta badan ku habboon ciyaaraha barafka ee Alpine iyo tartamada barafka oo bilaash ah. Xilligan 25. Iyada oo ay jirto baaxadda Ciyaaraha Caalamiga ah ee Jaamacadaha Caalamiga ah, waxaa jira Xawaaraha 460 oo daboolaya dhul ballaaran oo hektar 11 ah oo loo diyaariyey edbinta Alpine iyo tartamada slalom. In kasta oo dhulku ka kooban yahay meelo baraf ah oo kaladuwan, haddana waa muuqaal muhiim ah Konaklı oo ah in ay ku siiso fursad ay ku dhisto xiriir ka dhexeeya goobahan.
Gez Plateau: Xarunta isboortiga jiilaalka ee Gez Plateau waxay ku taalaa 2200-2770 m oo masaafo ah iyo 7 km bariga Erzurum. Hektar 54 wuxuu leeyahay seddex durdur oo balaaran oo ka koraysa xagga sare ilaa waqooyi bari. Aagga is dulsaarka ayaa u dhexeeya 2150 m iyo 2750 m. Waxay ku habboon tahay barafka alifleetiga iyo barafka xorta ah. Si kastaba ha noqotee, wax daraasad ah lagama sameyn Gez Plateau marka la eego isboortiga xilliga qaboobaha.
Kandilli: Kandilli Ski Resort, 25. Waxaa loo sameeyay in loogu adeego biathlon iyo tartamada orodka lagu cayaaro marka loo eego baaxadda Ciyaaraha Caalamiga ah ee Jaamacadaha Caalamka-Jaamacadeed. Kandilli Ski Resort waxaa lagu dhisay 160 ha terrain iyo dhaadheer waxay ku yaalliin meesha sare 1713-1767 m. 36 km u jirta bartamaha magaalada. Away. Kandilli waxay leedahay xarun baraf-bood, barafka barafka leh heerar adag oo kala duwan, xarun baraf ah iyo isgoysyada barafka ah.
Xarunta Saadka ee Palandöken ee gudaha
Apaydın, Erzurum Station iyo Palandöken Logistics…